Mofon’aina – ALAKAMISY 31 MAI 2018 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ALAKAMISY 31 MAI 2018
Fanahy Masina, Fanomezana
9 Ary hoy izaho aminareo: Mangataha, dia homena ianareo; mitadiava, dia hahita ianareo; dondòny, dia hovohana ianareo.10 Fa izay rehetra mangataka no mahazo; ary izay mitady no mahita; ary izay mandondòna no hovohana.11 Fa iza moa aminareo izay ray, raha angatahan’ ny zanany mofo, no hanome azy vato? ary raha angatahany hazandrano, no hanome azy menarana ho solon’ ny hazandrano?
LIOKA 11 : 9-11
NY FANOMEZANA TSARA INDRINDRA
1-Ilam-pitandremana sao tsy ho voaraintsika
Misy teny telo andidian’ny Tompo ataontsika eto : « mangataha , mitadiava, dodony » . Fihetsika asain’ny Tompo ataontsika ireo, ary somary takona ao ambadika ny hoe: mangataha amin’ny Tompo, mitadiava ao Aminy, ary dony varavarana Izy. Olana lehibe ny fakampanahy hiheverantsika fa isika efa ao an-tranon’ny Ray, tsy any ivelany ka tsy ilaina intsony ny mandondona. Ray mahalala ny omena antsika zanany Izy ka tsy ilaina akory ny mangataka Aminy. Efa eo anatrehany isika , atobany amintsika ny zava-tsoa rehetra ka tsy ilaina intsony ny mitady zavatra ao Aminy . Fakampanahy izany ka tandremo. Mazava ny tenin’i Jesoa natao ho antsika ary mandidy antsika Izy : « mangataha,mitadiava,dodony … »
2-Fanahy Masina izay angatahina amin’ny Ray
Ny and 13 no mampiseho amintsika ny fahambonian’ Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny Ray niteraka. Manaporofo izany ny hoe: « tsy mainka va ny Ray izay any an-danitra no hanome ny Fanahy Masina » Raintsika Izy, ary ny fangatahantsika Aminy no hahazoana antoka hanomezany antsika ny Fanahy Masina. Na dia efa nirahin’ny Ray tamin’ny Anaran’i Jesoa aza ny Fanahy (Jao 14 :26) dia ampirisihana isika hangataka izany. Io no fanomezana tsara indrindra mba hitarika antsika mba hananantsika ny toetran’ny fahamasinana, hananantsika ny toetran’ny zanaka mba hananantsika fahasahiana miantso Azy ho Ray (Rom 8 :16; Gal 4 :6). Angatahina ny Fanahy masina , satria tena fakampanahy koa ny hoe: efa nomeny ka tsy ilaina angatahina intsony .
Moa misy fanomezana tsara sy sarobidy hafa nomen’ny Tompo antsika koa ve ankoatra ny Fanahy Masina?
Mofon'aina - TALATA 29…
Mofon'aina - ZOMA 01…